ဘေးကင်းလုံခြုံကစားစရာ, အော်ဂဲနစ် Teethers, Sweetooth ကလေး Teether - Melikey
လက်ကား - စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း - OEM & ODM
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R&D အဖွဲ့ရှိပြီး OEM/ODM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဆီလီကွန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် 10+ နှစ်ကြာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်
Melikey သည်China silicone wholesale baby brand owned by Huizhou Melikey Silicone Product
Melikey သည် ၎င်း၏ ဆီလီကွန်ကလေး ညစာစားပွဲနှင့် ဆီလီကွန်ကလေးကစားစရာများအတွက် လူသိများသည်။
ဆီလီကွန်ကလေး ဘေဘီများ၊ ဆီလီကွန်ကလေးပန်းကန်များ၊ ဆီလီကွန်ကလေးပန်းကန်များ၊ ဆီလီကွန်ကလေးဇွန်း၊
ဆီလီကွန်အံသွားနှင့် ဆီလီကွန်ပုတီး စသည်တို့ကို တရုတ်ကလေးကစားစရာ လက်ကားရောင်းချသူ။
ကုမ္ပဏီကို 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Guangdong ပြည်နယ် Huizhou City တွင် တည်ရှိသည်။ အ
စပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် အရောင်းဝန်ထမ်း ၁ ဦးနှင့် အလုပ်ရုံငယ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အတိုင်းအတာလည်း တိုးလာခဲ့သည်။
တိုးချဲ့ ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အော်ပရေတာသည် ကလေးမိခင်ဖြစ်သည်။
Because she knows how အရေးကြီးသည် ကို the child’s health and safety is,the company’s first philosophy
အမြဲတမ်း “ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသည် အသက်ဖြစ်သည်” ဟူသော အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ထူထောင်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည်
စျေးကွက်နှင့် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ မူလတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ပြန်
ကာ ထုတ်ကုန်များ၏ အသစ်အဆန်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် OD M ကိုလက်ခံနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ လက်ကားရောင်းချသူအဖြစ် ဂုဏ်ယူပါသည်။
Melikey Silicone is an extraordinary name among the အကောင်းဆုံး ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန် ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံတွင် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်မှိုများထုတ်လုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ 12 နှစ်ကျော်ရှိသည်။ small around the world to promote themselves in an impactful way through our strength in silicone products factories and wholesale silicone products suppliers. Proud to be the leading silicone teether manufacturer, baby toys wholesale suppliers.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆီလီကွန်ကလေးသုံးပစ္စည်းများ လက်ကားထုတ်လုပ်ရန် အရည်အသွေးမြင့် အစားအစာတန်းစီလီကွန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပါသည် ( ဆီလီကွန်အံ,ဆီလီကွန်ပုတီးလက်ကား,ကလေးနို့တိုက်သည့်အစုံ, ဆီလီကွန်ပန်းကန်လက်ကား,ဆီလီကွန်ပန်းကန်လက်ကား,ဆီလီကွန်ဗိုက်,ဆီလီကွန်ခွက်လက်ကား ၊ နှင့် ကလေးကစားစရာလက်ကား ) .
ထုတ်လုပ်မှု အတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်းများစွာက ကျွန်ုပ်တို့အား ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို အလွယ်တကူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေကာ၊ ၎င်းသည် ဆီလီကွန်ကလေး ညစာစားပွဲနှင့် ဆီလီကွန်ကလေးကစားစရာ အကောင်းမွန်ဆုံး ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထူးခြားသော အားသာချက်ဖြစ်သည့် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များအတွက် လက်ကားထုတ်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ခိုင်မာသောအာမခံချက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကအားဖြင့် လက်ကားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက် ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ အစုလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ကုန်ပစ္စည်း၏ ယူနစ်စျေးနှုန်းနှင့် ပို့ဆောင်ခကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ဝယ်ယူသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစမ်းသပ်ရန်နှင့် စျေးကွက်တုံ့ပြန်ချက်ကို လျင်မြန်စွာလက်ခံရရှိရန် ကူညီပေးရန်အတွက် အချို့သော MOQ ဖြင့် အသေးစားအသုတ်မှာယူမှုများကိုလည်း လက်ခံပါသည်။ ။ today, chat with us online or call +86 13480570288 to start your project.
Melikey သည် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်ရောင်းချသူ ဖြစ်သည်။ with factory customization service. We support customized items such as custom LOGO, packaging, color, etc. Each custom item hasadifferent product MOQ. From product design to customization, Melikey provides the best value-added services for your products. We support customization for all products, Welcome to OEM&ODM orders !
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့် မူပိုင်ခွင့်ရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုပြဿနာမှ မပါဝင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မူရင်းထုတ်ကုန်များကို စတင်ရောင်းချရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာအနှံ့ရရှိနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
အကောင်းဆုံး ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ လက်ကားရောင်းချသူ အကြောင်း နောက်ထပ်ပြောပါရစေ ။
စီလီကွန်နှင့် သစ်သားချိတ် လက်စွပ် စိတ်ကြိုက် OEM l Mel...
ကလေးနို့တိုက်ခြင်းအစုံ စီလီကွန် ပန်းကန်ခွက်ယောက် လက်ကား l...
Baby Silicone Plate Set ကျွေးခြင်း စိတ်တိုင်းကျ l Melikey
Baby Stacking Toy Silicone Montessori လက်ကား
ဆီလီကွန်သွားတိုက်အရုပ် BPA အခမဲ့လက်ကား l Mel ...
အိတ်ဆောင်ဆီလီကွန် BPA- အခမဲ့ OEM နှင့်အတူကလေး Pacifier l ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်း ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ လက်ကားရောင်းချသူ
ထိပ်တန်း ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ နှင့် လက်ကားဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များရောင်းချသူ အနေဖြင့် ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင် 12 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီး အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် လက်ကားဆီလီကွန်အံသွားများ,လက်ကားဆီလီကွန်ဝါးပုတီးစေ့များ,လက်ကားကလေးပန်းကန်, လက်ကားကလေးနို့တိုက်ကျွေးရေးအစုံ နှင့် အခြားဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံများက ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ကားလုပ်ငန်းတွင် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များအတွက် အလွန်ရင့်ကျက်လာစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R&D အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လစဉ် ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ ရှိပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် သင့်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းများကို ထိရောက်စွာ ပြီးမြောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
As ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်စက်ရုံနှင့် အ ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ လက်ကားရောင်းချသူ, we accept OEM and ODM custom service, send your design to us, we can make real sample within7days, put your logo on wholesale toddler toys,bulk baby teethers, silicone beads and baby tableware, etc. Our extraordinary silicone products factory specializes in bulk production of silicone products. Any silicone material product is notaproblem for us. Whether you areawholesaler orabrand, our best silicone products factory will help you grow your business quickly with high-quality products and perfect service.
ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ! Providing excellent customer service is the eternal pursuit of Melikey Silicone as the best supplier of silicone products!
OEM & ODM ပံ့ပိုးမှု
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ လိုဂို၊ ပက်ကေ့ခ်ျ၊ အရောင်များ အပါအဝင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။... ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် OD M ကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။
ခဲချိန်တိုတိုဖြင့် သင့်အတွက် အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ထားသော ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ။ အားလုံးက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ၏ အကောင်းဆုံးလက်ကားရောင်းချသူဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်ပေးသွင်းသူများမှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ 100% QC ကုန်ကြမ်း။ ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆင့်များကိုသေချာစေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုများနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်ထားပြီး၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည် တင်ပို့ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မီတွင် ပြင်းထန်သောစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆီလီကွန်လုပ်ငန်းတွင် 12 နှစ်ကျော် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ Melikey Silicone သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိရောက်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေမည့် အကြံဉာဏ်သစ်များကို ပေးပါသည်။
ကလေးငယ်များ ဘာကို ဦးစွာစားပါသလဲ l Melikey
ကလေးဦးဆောင်သောနို့ဖြတ်ခြင်းအတွက်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ l M...
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2022 : All Rights Reserved. လမ်းညွှန် ,Hot ထုတ်ကုန်များ ,မြေပုံအညွှန်း ,amp မိုဘိုင်း
ဆီလီကွန်ကလေး teether , သဘာဝအသွားများ, ဆီလီကွန် teether ,4လအရွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး teether , ဆီလီကွန်အံသွားပုတီး , ကလေးကမိန်းကလေးများအတွက်လည်ဆွဲ teething,